प्रश्नोत्तरमा पवन चामलिङ- एसडीएफले गरेको राम्रो काम एसकेएमले नष्ट गर्दै लगेको आरोप – Sikkim Journal
“ प्रश्न – तपाईंको जन्म दिनको अवसरमा तपाईंलाई सोधिएका प्रश्नहरूमध्ये एसकेएम-ले गरेको कुनै एउटा राम्रो काम बताउनु परे के बताउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि थियो। तपाईंको प्रतिक्रिया?
राम्रो काम त होइन, तर त्यसको बिल्कुल उल्टा हामीले गरेका सबै राम्रा कामहरू पनि एसकेएम-ले नष्ट गर्दै लगिरहेको छ। एसकेएम सरकारले बुझ्नुपर्छ कि सिक्किमको पक्षमा हामीले गरेका कामहरू पवन चामलिङका व्यक्तिगत कामहरू थिएनन्, र होइनन्। हाम्रो सरकारका काम, नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू सिक्किम र सिक्किमे जनताका हित र कल्याणका पक्षमा थिए। ती सबै कुराहरूको सफलतापूर्ण कार्यान्वयनको कारणले नै सिक्किमको सामग्रिक समृद्धि सम्भव हुनसकेको हो। संसारभरि नै अघिल्ला सरकारहरूले गरिराखेका राम्रा कामहरूलाई नयाँ सरकारले निरन्तर अघि बढ़ाउने गर्छन्। तर हेर्नोस् त हाम्रो सिक्किममा अर्ग्य़ानिक खेतीको हालत आज के बनाइएको छ?
हामीले विश्वलाई नै देखायौं कि अर्ग्यानिक खेती सम्भव छ। तर आज विश्वलाई सिक्किमले नै देखाउँदैछ कि अर्ग्यानिक खेती सम्भव छैन। यसरी गलत उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिइएका छन्। एसडीएफ-ले विश्वमा जलाएको आशाको दीयोलाई एसकेएम-ले निभाउने काम गर्दैछ। यो केवल एउटा उदाहरण मात्रै हो। एसडीएफ-ले शुरू गरेका सबै राम्रा काम, कार्यक्रम, नीति, योजना र कानूनहरूलाई एसकेएम-ले केवल तोड़्ने, भत्काउने र बिगार्ने कामहरू गरिरहेको छ।
विश्वका अग्रणी र विकसित देशहरूमा अघिल्ला सरकारका उपलब्धिहरूलाई नयाँ सरकारले संग्रहालयहरूमा सुरक्षित र संरक्षित गर्ने गर्छन्। 1994-मा हामीले सरकार गठन गर्दा अघिल्ला सरकारहरूका कुनै व्यवस्थित रेकर्डहरू उपलब्ध थिएनन्। हामीले छोग्याल, काजी तथा नरबहादुर भण्डारी कालका उपलब्ध रेकर्डहरूलाई डिजिटाइज गरेर सुरक्षित गऱ्यौं। पाउन सकिएका सबै तथ्यहरूलाई हामीले सुरक्षित गऱ्यौं। तर एसकेएम सरकार गठन हुनासाथ हाम्रा उपलब्धिहरूका 16 ट्रक किताब र कागजहरू जलायो। आजको युगमा यस्तो कुरो कसैले कल्पना मात्र पनि गर्नसक्ला?
कति गरीब र पछौटे मानसिकता! रेकर्ड वा किताबहरू जलाउने प्रथा आदिम मानसिकताको द्योतक हो। एसकेएम-को कार्यकलापले हामीलाई इतिहासको त्यस्तै कालो पन्नाको याद गराएको छ। 21औं शताब्दीमा किताब जलाएर उनीहरूले उदेकको इतिहास सिर्जना गरेका छन्।यो सोच्दा पनि लाज लागेर आउँछ कि आज हामी किताब जलाउऩे सरकारको अधीनमा छौं! त्यसैले म प्रति-प्रश्न गर्नचाहन्छु किताब जलाउने सरकारबाट हामीले के राम्रो कुरोको अपेक्षा गर्ने?
एसडीएफ सरकारले शुरू गरेका सबै राम्रा कामहरूलाई उल्ट्याउने काम मात्रै एसकेएम-ले गरिरहेको छ। यी तलका तथ्यहरूले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्नेछन्।
हामीले सिक्किममा जलविद्युत परियोजनाहरू चालू गऱ्यौं। आज एसकेएम-ले सबै परियोजनाहरू एकपछि अर्को गर्दै बेचिरहेको छ।
हामीले गान्तोकमा अत्याधुनिक नयाँ एसटीएनएम हस्पिटल निर्माण गऱ्यौं। आज एसकेएम-ले पुरानो एसटीएनएम हस्पिटल बाहिरका व्यापारीलाई बेच्दैछ।
हामीले सिक्किमलाई अर्ग्यानिक राज्य बनायौं, आज उनीहरूले त्यो प्रक्रियालाई नै उल्टाउने काम गरिरहेको छ।
देशको सबैभन्दा स्वच्छ राज्य (सिक्किम 2008 -मा देशको पहिलो निर्मल राज्य घोषित भएको र पुरस्कृत बनेको राज्य हो) आज देशकै सबैभन्दा फोहोर राज्यमा परिणत हुँदै गएको छ।
हामीले गान्तोकको रीज पार्कलाई सुन्दरीकरण गरी सुरक्षित गरेका थियौं, त्यो स्थललाई अहिले सरकारले हाउजिङ साइट बनाउँदै धमाधम बेच्दैछ।
हामीले राज्यमा उद्योगीकीकरण गरेर रोजगार सिर्जना गऱ्यौं, तर अहिले हाम्रा मानिसहरूको रोजगारी खोसिँदैछ, र कतिपय उद्योगहरू ताला लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
हामीले गान्तोकलगायत राज्यका अन्य शहरी इलाकाहरूमा बहुतल्ले पार्किङ स्थलहरू बनायौं। आज ती सबै बिल्डिङहरू बेच्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। पुलिस हेडक्वार्टर नजिकको पार्किङ बाहिरको व्यापारीलाई बेचिसकेको छ।
हामीले मदर डेरी फार्म खोल्यौं, प्रशिक्षण केन्द्र बनायौं, र कर्फेक्टारमा क्षमता विकास निर्देशनालय भवन बनायौं। अहिले सरकारले त्यो सिङ्गो जमीन नै बाहिरको मान्छेलाई बेचेको छ।
हामीले देशमै रेकर्ड बनाउँदै राज्यको वन क्षेत्रलाई लगभग5प्रतिशत बृद्धि गऱ्यौं। अहिले राज्य सरकारले धमाधम रूख काट्ने र काठपात सिक्किमबाहिर बेच्ने काम गरिरहेको छ।
हामीले आफ्नो कार्यकालमा 1 लाख सिक्किमेहरूलाई सरकारी नोकरी दिलायौं। यो सरकारले हाम्रा मानिसहरूलाई नोकरीबाटै निकाल्दैछ। एक परिवार – एक नोकरीअन्तर्गत नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले कामबाट निकालिरहेको छ।
हामीले पारदर्शी ढङ्गले नोकरी दियौँ, अहिलेको सरकारले गोप्य ढङ्गले आफ्नाहरूलाई नोकरीमा लगाउँदैछ।
सिक्किमले देशकै रेकर्ड 31 प्रतिशत आर्थिक बृद्धि दर हाम्रो पालामा हासिल गरेको थियो। आज सिक्किमको बृद्धि दर देशकै निंम्नतम बनेको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रमा समेत सबैभन्दा निम्न बृद्धि दर सिक्किमको छ।
हामीले सिक्किमको साक्षरता दर 97 प्रतिशत पुऱ्यायौं। आज पनि देशको यो सर्वोच्च साक्षरता दर हो। हामीले शिक्षालाई कलेज तहसम्म निःशुल्क बनायौं। हामीले 15 प्रतिशतको दरले शिक्षण केन्द्र र संस्थानहरू निर्माण गऱ्यौं, जबकि राष्ट्रिय दर7प्रतिशत मात्र छ। हामीले राज्यमा युनिभर्सिटीहरू स्थापना गऱ्यौं। तर आज शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै त्रस्त छन्। उनीहरू असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्। ताज्जुब लाग्ने कुरा त गेजिङ कलेजका4जना विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाटै सरकारले निष्कासित गऱ्यो!
सिक्किमले गरेको महिला सशक्तीकरणको उपलब्धिको चर्चा र प्रशंसा सर्वत्र हुने गर्दथ्यो। महिलाहरूलाई विधानसभाको अध्यक्ष, मन्त्री, स्थानीय स्वशासनमा 50 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी नोकरीहरूमा 33 प्रतिशत आरक्षण दिइएको थियो। सिक्किम सरकारमा 50 प्रतिशतभन्दा अधिक महिला कर्मचारीहरू छन्। आज महिलाहरू न विधानसभाका अध्यक्षा छन्, न मन्त्री मण्डलमै सामेल छन्।
राष्ट्रिय अपराध तथ्याङ्क ब्यूरोको अध्ययनमुताबिक सिक्किम महिलाहरूको निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित राज्य ठहर गरिएको थियो। सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेश्नल स्टडीज तथा सुविख्यात अमेरिकन संस्था नाथन एसोसिएटको अध्ययन अनुसार देशमै महिलाहरूको निम्ति सबैभन्दा सुरक्षित वातावरण भएको राज्यको रूपमा सिक्किम निर्वचित भएको थियो। तर आज राज्यमा बलात्कार र यौन उत्पीड़नका घटनाहरू बढ़िरहेका छन्। आश्चर्यलाग्दो कुरो त के छ भने सरकारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि नै यौन उत्पीड़नको आरोप लागिरहेको छ। आज राज्यका महिलाहरू आफैलाई सुरक्षित महसूस गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
हामीले हाइड्रो पावर, लटरी तथा औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट राज्यका राजस्व स्रोतहरू बढ़ाउने पूर्वाधारहरू निर्माण गऱ्यौं। यो राजस्व सिक्किमे जनताको धन हो। एसकेएम सरकारले यी सबै सम्पत्तिहरू बेच्दैछ र त्यसरी उठेको पैसाले मुख्यमन्त्रीले आफ्ना पार्टी समर्थकहरूका लागि गाड़ी किन्दैछन्। एसकेएम प्रमुखले आज आफ्ना टीमका साथीहरूलाई त्यही लुटको धन मिन्तोगाङमा बाँड़्दैछन्। यस्तो लाग्छ, आज सिक्किम सरकारभन्दा एसकेएम पार्टी बढ़ी धनी छ। यदि यो सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति होइन भने मुख्यमन्त्री गोलेले कहाँबाट, कुन स्रोतबाट पैसा पाउँदैछन्? यसको हिसाब जनताले खोज्नेछन्। मुख्यमन्त्रीले यो कुरो बुझ्नु जरूरी छ कि उनको आफ्नो मुट्ठीभर पार्टी समर्थकहरूको लागि गाड़ी किन्नका लागि उनले सारा सिक्किमे युवाहरूको भविष्य बेच्न पाउनेछैनन्।
अहिले राज्यमा मानव सुरक्षा र शान्ति खतरामा छ। हाम्रो सरकारमा सिक्किममा देशकै सबैभन्दा कम अपराध दर थियो। आज जनगण पुलिस विभागमाथि नै विश्वास गर्न छोड़िसकेका छन्। केही दिन अघि मात्र रोलेप मिटिङबाट फर्किँदै गर्दा हाम्रा पार्टी समर्थकहरूले एसकेएम समर्थकहरूको छेकाबार तोड़ेर घर फर्किनुपऱ्यो। हाम्रा समर्थकहरूलाई आफन्तहरूको ट्रान्सफर रोक्न, कामको बिल भुक्तान गर्न तथा घरको सुरक्षा गर्न एसकेएम-मा सामेल हुने दबावहरू दिइँदैछ।
म तपाईंहरूलाई एक नेताको रूपमा हिटलरको कार्यप्रणालीलाई सम्झना गराउनचाहन्छु। जब उनले पहिलोचोटि जर्मनीमा सरकार गठन गरे, उनले सबैभन्दा पहिले सबै जर्मन नारिकहरूलाई नाजी पार्टीमा भर्ना गराए र पार्टीप्रति वफादार बन्ने कसम खुवाए। हिटलर शासनले नागरिकका निजी र व्यक्तिगत जीवनलाई प्रत्यक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। आज सिक्किममा यही काम शुरू भएको छ। यो अत्यन्त भयानक, गम्भीर र चिन्ताको विषय हो।”
पाठकहरूले यस- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bootalpha.sikkimjournal लिङकको सहयोगमा हाम्रो मोबायल एप पनि इन्स्टल गरेर पढ्नसक्नु हुनेछ। निवेदक- जगन दाहाल, सिक्किम जर्नल, गान्तोक सिक्किम। मो. 8617312182 / 8768791978 ई-मेल- sikkimjournal@gmail.com